Accueil > Gazetin'ny nosy > Mananjara Ibity Antsirabe: Filohan’ny fokontany matin’ny dahalo
Mananjara Ibity Antsirabe: Filohan’ny fokontany matin’ny dahalo
Mihorohoro tanteraka ny mponina ety amin’ny faritra Vakinankaratra noho ny asan-jiolahy. Nitrangana fanafihan-dahalo tao amin’ny kaominina Ibity distrikan’ Antsirabe 2 ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy 19 martsa 2018 lasa teo.
Raha ny fantatra dia tamin’ny 9 ora mahery no nitranga ity fanafihana ity. Olona 2 no lavon’ny bala, lehiben’ny fokontany tokony ho 70 taona eo ho eo ary ny zana-drahalahiny izay nifanena tamin’ny dahalo.
Tsy voafaritra mazava ireo dahalo nanafika fa tratran’ny tampim-baravarana ireo mponina ka tsy afa-nivoaka .Ary nisy ihany koa ny poa-basy inefatra nataon’ireo dahalo.
Nambaran’ny tompon’omby fa nisy namaha ny omby ary misy mitsilo amin’ireny jiro mazava be ireny. Omby 12 no noroahan’ireo dahalo tao amin’ny vala ka nentin’izy ireo nianavaratra ny tanàna ary niakandrefana avy eo, nihazo ny lalana mankany Bemaha.
Taitra ireo fokonolona ka nandeha nanara-dia nanenjika ireo dahalo. Tamin’izany anefa dia nizara 2 ireo dahalo ka ny sasany nandroaka ny omby ary ny sasany nijanona niafina niandry ireo vahoaka manara-dia.
Nanapoaka basy indray moa ireto dahalo ka niparitaka ny omby ka 3 no azo tamin’ny omby 13. Nanohy ny fanenjehana ireo vahoaka ary ny sasany nanatitra ny razana roa tany an-tanàna.
Tsara ny manamarika fa misy poste fixe an’ny zandary ao Ibity. Saingy variana miambina ny AAA Tiko nisy zandary ka tsy nisy tao an-tanàna dia izao miantraika amin’ny ain’ny vahoaka izao.